Nohamafisina fa laharam-pahamehana ny fiahiana ara-tsosialin’ny mpiasa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanomezana asa mendrika ho an’ny mpiasa Malagasy manerana ny Nosy. Tafiditra ao anatin’izany ny fanomezana fiahiana ara-tsosialy ho an’ny mpiasa tsy an-kanavaka. Ka anjaran’ny Disitrikan’i Manakara no nandray ny fampiofanana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy izay nokarakarain’ny CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) sy ny Ministeran’ny Asa, ny Fampananana Asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna Sosialy ny 10-12 jolay 2019, tao @ Salle d’œuvre LPM (Lycée Présentation de Marie) fokontany Antanambao Manakara. Mpampiasa, mpiasa, lehiben’ny orinasa, mpiasam-piangonana, fikambanana tsy miankina no voasolontena tao amin’ny alalan’ny olona niisa 100 no nisitraka izany fampiofanana izany. Nanokatra ny fiofanana tamin’ny fomba ofisialy ireo manam-pahefana tao an-toerana izay nahitana ny prefet, ny lefitry ny ben’ny tanàna, ny lehiben’ny faritra, ny talem-paritry ny asam-panjakana, ny fampananan’asa ary ny fiahiana ara-tsosialy，ny talen’ny CNAPS Manakara (DDG) Randriamamonjiarison Rivo. Nambaran’ny talen’ny CNaPS Manakara fa : « tanjona ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny mpampiasa sy ny mpiasa ny lalàna mifehy ny asa, ny zon’ny mpiasa, ny fifanarahana arak’asa, ny fanampiana ara-tsosialy rehetra manomboka any am-bohoka ka mandrak’antitra.”
Nisongadina tao anatin’ny atrikasa izay notanterahina nandritra ny 3 andro fa vaindohan-draharahan’ny CNaPS ny fiahiana ara-tsosialy ho tombontsoan’ny rehetra, satria antoka iray mampisy fitoniana eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa izany no sady fanoitra ho fampandrosoana ny firenena. Anisan’ny nahaliana ireo mpiofana tao Manakara ny fampahafantarana ny atao hoe ny fiahiana ara-pahasalamana sy ny aro loza eny amin’ny toeram-piasana (Santé et sécurité au travail). Nisy ihany koa ny fanoroana ireo mpiofana ny fomba famenoana ireo taratasy fangatahana fanampiana satria ny fanampiana rehetra ao amin’ny CNaPS dia angatahina avokoa ; teo ihany koa ny fanazavana an-tsimpiriany momba ny fikajiana ny vola tokony ho azo amin’ny trangan-javatra miseho amin’ny mpiasa toy ny loza sy ny aretina ary ny nahaliana ny maro dia ny fisotron-dronono. “Hanampy ahy betsaka amin’ny asako ny fiofanana azoko teto indrindra ny fahafantarako ireo zo isan-karazany na ho an’ny tenako na ho an’ny vady aman-janako, eo koa ny fiarovana ny mpiasa” hoy I Tsiresimana Christian Berger, mpiasan’ny InterAID Fahasalamana ao Manakara,. Taorian’ny fiofanana, notolorana marim-pankasitrahana ireo mpiofana rehetra.
Ankoatra izay, nisy ny fidinana ifotony sy ny fitetezan’ny “task force” nahitana ny tompon’andraikitra avy amin’ny Ministeran’ny Asa sy ny CNaPS ireo orinasa tsy miankina tao Manakara hatrany Vohipeno. Nentanina ireo mpampiasa fa tena zava-dehibe amin’ny maha-olona ny fanomezana fiahiana ara-tsosialy sy ny fitandroana ny fahasalamana ary ny ain’ny mpiasa eny anivon’ny orinasa. Nisy ihany koa ny fanoroana ireo mpiasa ny zony mikasika ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fanomezana asa mendrika.